ESI GBANWEE FONT WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Esi gbanwee font Windows 10
Site na ndabara, na Windows 10, a na-eji fon Segoe UI mee ihe maka ihe niile dị n'usoro ihe na onye ọrụ enyeghị ohere iji gbanwee nke a. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe font nke Windows 10 maka usoro ahụ dum ma ọ bụ maka ihe ọ bụla (akara ngosi akara ngosi, mpempe akwụkwọ, mpịakọta mpịakọta) na otu esi eme nke a n'ụzọ zuru ezu. Naanị, enwere m ike ịmepụta ebe ịmeghachị usoro tupu ịme mgbanwe ọ bụla.
Achọpụtara m na nke a bụ ihe na-adọrọ adọrọ mgbe m kwadoro iji usoro nnwere onwe ndị ọzọ, kama iji aka na-edezi ndekọ ahụ: ọ ga-adị mfe, dokwuo anya na ịrụ ọrụ nke ọma karị. O nwekwara ike ịba uru: Otu esi gbanwee font na gam akporo, Otu esi gbanwee font size nke Windows 10.
Mgbanwe gbanwere na Winaero Tweaker
Winaero Tweaker bụ usoro n'efu maka ịhazi atụmatụ na omume nke Windows 10, na-enye ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-agbanwe agbanwe ederede nke usoro ihe omume.
Na Winaero Tweaker, gaa na ngalaba Nkebi dị elu, ọ nwere ntọala maka ụdị usoro ihe dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị anyị mkpa ịgbanwe akara nke akara ngosi ahụ.
Mepee ihe ihe oyiyi ma pịa bọtịnụ "Change font".
Họrọ ụdị ederede achọrọ, ụdị na ụdị ya. Lezienụ anya na eziokwu ahụ na "Character set" bụ "Cyrillic".
Biko rịba ama: ọ bụrụ na ị gbanwee font maka akara ngosi na ntinye aka wee malite "ịda mbà", ya bụ. Ọ bụrụ na ịkwadoghị n'ọhịa ahọrọ maka mbinye aka, ị nwere ike ịgbanwe ntụgharị ihuenyo na oghere spacing vertical iji kpochapụ nke a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, gbanwee ederede maka ihe ndị ọzọ (ndepụta ga-egosi n'okpuru).
Pịa "Mee mgbanwe" (gbanwee mgbanwe), wee pịa Banye Ugbu a (ịbanye iji tinye mgbanwe), ma ọ bụ "Aga m eme ya n'onwe m" (ịbanye onwe gị ma ọ bụ malitegharịa kọmputa gị, mgbe ị na-azọpụta data dị mkpa).
Mgbe emechara omume ahụ, a ga-etinye mgbanwe ndị ị mere na fon Windows 10. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọgharịa mgbanwe, họta "Tọgharia ntọala dị elu" wee pịa bọtịnụ otu na windo a.
Usoro mmemme nwere mgbanwe maka ihe ndị a:
Ihe ngosi - akara ngosi.
Menus - nchịkọta nhọrọ nke mmemme.
Font Ozi - njirimara nke ozi ederede nke mmemme.
Ọnọdụ Statusbar - ihe edere na ogwe ọnọdụ (na ala nke window window).
Font System - a usoro usoro (gbanwee ọkọlọtọ Segoe UI na usoro ị họọrọ).
Okpokoro Mpempe akwụkwọ windo - mpịakọta mpịakọta.
Mụtakwuo maka usoro ihe omume ahụ na ebe ị ga-ebudata ya na edemede Customizing Windows 10 na Winaero Tweaker.
Ihe omume ọzọ nke na-enye gị ohere igbanwe ụdị fon nke Windows 10 - Advanced System Font Changer. Omume dị na ya ga-adị nnọọ ka:
Pịa na font aha n'ihu otu n'ime ihe.
Họrọ ụdị ị chọrọ.
Tinyegharịa dị ka ihe dị mkpa maka ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na Di elu taabụ, gbanwee ogo nke ihe ndị ahụ: obosara na ịdị elu nke aha akara ngosi, elu nke menu na aha windo, nha bọtịnụ mpịakọta.
Pịa bọtịnụ Mee ka ịpụ ma tinye mgbanwe n'elu nbanye.
Ị nwere ike ịgbanwe mkpụrụ akwụkwọ maka ihe ndị na-esonụ:
Ogwe aha - aha nke windo ahụ.
NchNhr - ihe nchịkọta ihe na mmemme.
Igbe ozi - edemede na igbe ozi.
Palette aha - font maka utu aha na windo.
Tooltip - njirimara nke ogwe ọnọdụ na ala nke usoro ihe omume.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji tọgharịa mgbanwe, jiri bọtịnụ Nhọrọ na windo mmemme ahụ.
Ịnwere ike ibudata Advanced System Font Changer site na saịtị onye mmepụta ọrụ: http://www.wintools.info/index.php/advanced-system-font-changer
Gbanwee Windows 10 usoro font iji ndekọ Editor
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịgbanwe koodu ntọala dị na Windows 10 na iji nchịkọta ndekọ.
Pịa igodo Win + R, pịnye regedit na pịa Tinye. Nchịkọta edetu ga-emepe.
Gaa na igodo ndekọ
HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion  Fonts
ma kpochapụ ọnụahịa niile Segoe UI na-asụ ma e wezụga Segoe UI Emoji.
Gaa na ngalaba
mepee Segoe UI dị na ya ma tinye aha nke font nke anyị na-agbanwe font dị ka uru. Ị nwere ike ịhụ aha ndebanye site na ịmepe nchekwa C: Windows Fonts. A ga-abanye aha ahụ kpọmkwem (ya na otu mkpụrụedemede ndị a na-ahụ na nchekwa).
Mechie ndekọ nchịkọta akụkọ ma banye, wee banye na ya.
Ị nwere ike ime ka ihe a niile dị mfe: mepụta faịlụ ndekọ ebe ị chọrọ ikwipụta aha fon ahụ na akara ikpeazụ. Ihe dị n'ime faịlụ faịlụ ahụ:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion  Fonts] "Segoe UI (TrueType)" = "" "Segoe UI Black (TrueType)" = "" "Segoe UI Black Italic (TrueType)" = "" Segoe UI Bold Italic (TrueType) "=" "" Segoe UI History (TrueType) "=" "" Segoe UI Italic (TrueType) "=" "" Segoe UI Ìhè (TrueType) "=" "" Segoe UI Semibold (TrueType) "=" "" Segoe UI Semibold Italic (TrueType) "=" "" Segoe UI Semilight (TrueType) "=" "" Segoe UI Semilight Italic (TrueType) "=" "[HKEY_LOCAL_MACHINE  SOFTWARE  Microsoft Windows NT  CurrentVersion  FontSubstitutes]" Segoe UI "=" Aha Font "
Gbaa faịlụ a, kwenye ime mgbanwe na ndekọ ahụ, wee pụọ na banye na Windows 10 iji tinye mgbanwe mgbanwe usoro usoro.